Ndi Mgbasa Ozi Nwere Ike Createmeputa Ntinye Aka Ntinye Ntinye Anya na Viz Virtual Studio | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Home » Apụta » Ndi Mgbasa Ozi Nwere Ike Createmeputa Ntinye Aka Ntinye Ntinye Anya na Viz Virtual Studio
Ọ bụrụ n’ị bụ onye okike nke na-arụ ọrụ n’ime ụlọ ọrụ mgbasa ozi, mgbe ahụ ọ bụghị ihe ịtụnanya ikwu etu isi akụkọ si bụrụ maka njirimara gị yana ndị na - ege gị ntị. Onye ọ bụla na -emepụta ọdịnaya na ụlọ ọrụ mgbasa ozi nwere akụkọ ịkọ, na ihe ngosipụta nke ha na -emepụta bụ ụgbọala zuru oke na ịkekọrịta ahụmịhe ahụ na ndị na-ege ntị lekwasịrị anya. Ọ bụrụkwanụ na onye mgbasa ozi nwere ike ime ka akụkọ ha nwekwuo mmasị maka ndị na-ege ha ntị? Ọ bụrụkwanụ na ha ga-enyekwu ya ndụ? Ọ dị mma, ọ bụ ebe ahụ Vizrt abata na foto a Virtual Studio bụ ngwaọrụ kachasị mma iji mee ka ahụmịhe nke akụkọ ha dị ezigbo mkpa karịa ndị na-ege ha ntị.
ebe ọ bụ na 1997 Vizrt (Ihe nlere na Real-Oge) abụrụla onye na - eweta ụwa zuru ụwa ọnụ nke ndị na - ahụ maka ịkọ akụkọ maka ndị na - emepụta ọdịnaya na mgbasa ozi, egwuregwu, dijitalụ na n'ọdụ ụgbọ mmiri. Companylọ ọrụ ahụ na-enye usoro ngwanrọ na-akọwa ngwanrọ maka ezigbo 3D eserese, oghere vidiyo, akpaaka studio, nyocha egwuregwu, njikwa ngwa ahịa na ngwa akụkọ. Akụkọ ndị a kọọrọ site na Vizrt ndị ahịa kwa ụbọchị karịrị nde mmadụ atọ, yana nke ahụ gụnyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka CNN, CBS, NBC, Fox, BBC, BSkyB, Sky Sports, Al Jazeera, NDR, ZDF, Star TV, Network 18, Tencent, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ngini Viz, Viz Virtual Studio Ọ bụ ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ na onye na-eme ihe ngosi maka ihe mebere ndụ na mmepụta ihe ndị dị adị n'ezie. Ntọala Virtual (VS) na eziokwu augmented (AR) dị na mbido Nke Virtz ihe okike, nke ọ na-aga n’ihu ma a bịa n’iru ókè ihe ga-ekwe omume. Virtz na-eme nke a site na ijikọ ndị na - arụ ọrụ ngwa ngwa maka ndị nta akụkọ, ijikọ ya na sistemụ nsonaazụ dị elu, yana sistemụ arụmọrụ teknụzụ kacha elu ụwa na sava ihe ngosi vidiyo.
The Viz Virtual Studio na-enye ndị na-emepụta ihe ohere na-akparaghị ókè na ịkọ akụkọ, n'agbanyeghị ogo studio ahụ. Igwefoto Virtual na-enye ndị na-emepụta ihe ike ịmepụta ihe mgbagwoju anya, ihe mmemme, 3D kwalite asụsụ ọma, ndịna-emeputa emepe emepe n'ezie, yana ngosipụta eziokwu n'ezie agwakọta maka mmepụta ọ bụla. Ma abia na ịkọ akụkọ dị mgbagwoju anya, usoro ihe omumu na eserese ndị dị oke mkpa na-arụ ọrụ dị ka ngwaọrụ bara uru maka ndị na-abịa ya na ike ha iji mee ka akụkọ ndị ahụ nwee ike ịnweta ndị na-ahụ ihe nkiri. Nke a na-enye ohere maka mmụba nke iguzosi ike n'ihe mmemme na ọkwa site na ịlele ihe ndị doro anya, ma n'ihu ma n'azụ onye na-eweta ya. A na-enyekwa onye na-eweta ya ohere ịgafe oghere 3D ka igwefoto na-aga na ha ma na-emekọ mmekọrịta chiri anya ma ọ bụ ụdị infographics ndị ọzọ.
Viz Virtual Studio na-etinye aka na ndị na-eweta nsuso ọ bụla, nke na-enye ohere maka mgbanwe zuru oke maka iji eserese ndị dị oke agbatị na gburugburu ọ bụla. Nke a pụtara na Viz Virtual Studio's augmented real graphic nwere ike iji rụọ ọrụ na mpụga gburugburu, yana mmụba nke mmepụta n'èzí (mkpuchi ntuli aka na mmepụta egwuregwu dị ndụ), enwere ike ịme ya n'otu ahụ dị ka ọ nwere na studio.
Viz Virtual Studio na-atụgharị data nsuso na-esite na sistemụ ọ bụla ma ọ bụ na sistemụ onyunyo dabere ma ọ bụ njikọta nke abụọ. Ọ na - agbanwe ya na data igwefoto nke enwere ike iji ya Ngini Viz. Viz Virtual Studio na-ekesa ozi nsochi na ọtụtụ Viz Engines ma gunyere ịrụ ọrụ failover maka ịgagharị Viz Virtual Studio setịpụrụ yana usoro ntọala ya maka sistemụ nwere ike ọ gaghị na-agba ọsọ.
Isi ihe dị na Virtz Virtual Studio gụnyere:
3D mebere usoro
Inwe ihe omimi
akwado HD & UHD
Ndị na-ewu ụlọ chroma
Mmetụta nkwụnye dị ukwuu
Ndekọ nke nsuso data
Agba mmezi na ntinye
Dị mfe ịgbatị
Ihe eji eme ihe ngbanwe
Njikwa eserese nke atọ
Co-cyc na jidere matte
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Viz Virtual Studio, gaa na www.vizrt.com / ngwaahịa / viz-virtual-studio.
Ihe Mere Họrọ VizrtNgwọta Nkọwapụta Akụkọ nke Virtual
Akụkọ ifo bụ oge gara aga na onye ọ bụla na-emepụta ọdịnaya nwere akụkọ ọ ga-akọ. Maka ndi mgbasa ozi Vizrt nwere ike nyere gị aka nyere akụkọ ndụ ha karịa. Site na ntinye ohuru nke ihe mgbakwunye eziokwu na Virtual set, Virtual Studio na Virtz na-eje ozi dị ka ngwaọrụ zuru oke maka ndị na-agbasa ozi iji mee ka akụkọ ha dị ka nke ga-ekwe omume maka ndị na-ege ha ntị.
Virtz bụ ụlọ ọrụ nzuzo nke nwere ndị ọrụ ruru 700, na-arụ ọrụ n'ọfịs 30 n'akụkụ ụwa niile. Companylọ ọrụ ahụ enwetala ụlọ ọrụ na-eweta IP na-eweta usoro ngwanrọ na-arụ ọrụ, NewTek. Vizrt bụ nke ya Nordic Capital Fund VIII.
Maka ozi ọzọ na Virtz na akụkọ ha na-akọ, gaa na www.vizrt.na .com /.
agbasa ozi n'ikuku Onye na-ahụ maka mgbasa ozi Igwe ahia mgbasa ozi ụlọ ọrụ mgbasa ozi Onye Okike Oke Graham Chapman Prmoted toEditor sistemụ nlere anya nke onyonyo mwekota ndị na-ahụ maka ọdịnaya NewTek Nordic Capital Fund VIII ngwọta dabere na ngwanrọ Ụgha & Akụrụ akpaaka ulo Ultra HD Forum Ngosi Injinia Virtual Studio ịkọ akụkọ Viz Virtual Studio Vizrt 2020-05-05
Previous: Red Bee na-eburu ọrụ Playout maka BBC Persian na Channel TV News Channel
Osote: Broadlọ Mgbasa Ozi Egwuregwu nke Famer na-ebuli Live Audio na Studio Technologies